Friday Relase Archives ⋆ Filmy Pati
कमेडी जनराको ‘चौका दाउ’ र एक्सन जनराको भिलेन एक साथ प्रदर्शन
पौष २७ – फ्राईडे रिलिज अन्तर्गत आज दुई नेपाली चलचित्र एक साथ प्रदर्शनमा आएको छ । बिगेत केही साता यता बिग ब्यानरका हिन्दी फिल्मका कारण नेपाली चलचित्रहरु खास्सै प्रदर्शन नभएको बेला आज ‘चौका दाउ’ र ‘भिलेन’…
आजबाट ‘जय श्री दाम’
पौष २० – आजबाट चलचित्र ‘जय श्री दाम’ प्रदर्शन भएको छ । ट्रेलरको कारण राम्रो हाईप बनाएको ‘जय श्री दाम’ आजबाट प्रदर्शन भएको छ । मङ्की टेम्पल प्रोडक्शन, क्रेजी ह्याण्ड्स प्रोडक्शन र नेशनल मिडिया प्रोडक्शनको…
सुशिल पन्त – मंसिर २१ – ‘लै लै’ बोलको गीतबाट बहुप्रतिक्षित बनेको चलचित्र ‘प्रसाद’ आजबाट प्रदर्शन भएको छ । निसन्तान दम्पतिको कथामा बनेको ‘प्रसाद’ नाम अनुसारकै चलचित्र बनेको छ । देशभरका ७० भन्दा बढी सिङगल थियटर…
फ्राइडे रिलिजमा ‘हैरान’, दर्शकको रोजाईमा पर्छ की नाई ?
फ्राइडे रिलिज अन्तर्गत आज शुक्रबार एक मात्र फिल्म ‘हैरान’ प्रदर्शनमा आएको छ । कमेडी जनराको ‘हैरान’ फिल्ममा गजित विष्ट, बुद्धि तामांग, सत्यराज आचार्य, सरोज खनाल, सागर लम्साल, निश्मा घिमिरे, आराही शर्मा, वासिम राजा र शिशिर…
शुक्रबार हलमा दुई फिल्म, हेर्ने कुन ? कि दुवै ??
शुक्रबारदेखि हलमा २ नेपाली फिल्म प्रदर्शनमा आएको छ । यादब भट्टराई निर्देशित फिल्म 'भोर' साथै छेतन गुरुङ निर्देशित फिल्म 'डमरुको डन्डीबियो' प्रदर्शनमा आएको छ । चलचित्र 'भोर' दाइजोप्रथा संग सम्बन्धित छ भने, 'डमरुको डन्डीबियो' नेपालको…
साम्राज्ञीले सल्काईन नाजिरको दिलमा आगो, साम्राज्ञीलाई सजाय के ? (भिडियो)
आज शुक्रबार बाट प्रदर्शनमा आएको बहुप्रतिक्षित चलचित्र ‘तिमी सँग’ को चौथो गीत 'दिलमा आगो सल्कियो' सार्बजनिक गरिएको छ । गीतमा दीपक पाठकको आवाज रहेको छ, भने क्रितम कंडेल र पाठकको नै संगीत रहेको छ ।…
फ्राइडे रिलिज : बहुप्रतिक्षित चलचित्र ‘तिमी सँग’ हलमा, हेर्न जाने को सँग ?
फ्राइडे रिलिज अन्तर्गत बहुप्रतिक्षित चलचित्र 'तिमी सँग' आज शुक्रबार बाट प्रदर्शनमा आएको छ । लामो समयको पर्खाई पछि अन्तत फिल्म आज अर्थात् चैत्र २३ बाट प्रदर्शनमा आएको हो । युवा स्टारर फिल्मलाई हेर्न दर्शकहरुले लामो…
फ्राइडे रिलिजमा : मल्टीकास्ट ‘शत्रु गते’, कस्तो बनाउला रेकर्ड
चलचित्र नगरीका चलचित्र पण्डितहरुले 'शत्रु गते' ले विभिन्न रेकर्डहरु ब्रेक गर्ने आँकलन गरेका छन् । केहि चलचित्र विश्लेषकहरु ले पनि चलचित्र कस्ले बनायो, को-को कलाकार छन् भन्ने कुराले फिल्म चल्ने नचल्ने होइन । चलचित्र चल्नलाई…
नेपालमा पंचायत शासन ब्यबस्थाको बेलाको जनजीबन चित्रण प्रस्तुत गर्दै निर्माण भएको चलचित्र 'पंचायत’ आज शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको छ । पंचायती शासन व्यवस्थाका बेला कुनै एउटा गाउँको सामाजिक विषय र न्याय प्रणालीलाई आधार बनाएर निर्माण गरिएको…
हलमा तिन फिल्म ‘मंगलम’ को पल्ला भारी, तर कुन ? ले मार्ला बाजी
आजबाट बिधिबत रुपमा प्रदर्शनमा आएको तिन चलचित्र मध्ये चलचित्र 'मंगलम' बढीनै चर्चा परिचर्चा रहेको छ । साथै अन्य दूई चलचित्र भन्दा 'मंगलम' ले बढी प्रमोशनमा पनि ध्यान समेत दिएको छ । उता कमेडी जनराको चलचित्र…